यसरी बन्दैछ सरकार–विप्लव वार्ताको वातावरण, के वार्ता हुन थालेकै हो ?
आज नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेपाल बन्द । नेपाल बन्दको पूर्वसन्ध्यामा राजधानीका सुकेधारा र घट्टेकुलोमा आफ्नै असावधानीका कारण भएका दुई विष्फोटमा विप्लव नेकपाकै नेता तथा कार्यकर्ताहरु मारिएका छन् । त्यसपछि पनि देशभरका विभिन्न स्थानहरुमा बम विष्फोट हुने र भेटिने गरेका समाचारहरु आइरहेका छन् । त्यसबाहेक नेपाल बन्दको प्रभाव पनि उत्तिकै देखिएको छ ।
बन्दको यही पृष्ठभूमिमा मुलुकमा पछिल्लो समय विकसित विभिन्न घटनाक्रमहरुले सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच वार्ताका सम्भावना, छनक र संकेतहरु देखिएका छन् । यी सम्भावना र संकेतहरुले दिएका छनकहरुलाई हेर्ने हो भने त्यो कुरा स्पष्ट हुन्छ । पछिल्ला घटनाक्रम र संकेतहरुलाई विचार गर्दा सहजै प्रश्न उठ्छ– के सरकार र विप्लवबीच वार्ता हुन थालेकै हो ? वार्ता हुन थालेको भए पनि नभए पनि समाधानको बाटो भनेकै सम्वाद हो, वार्ता हो । त्यसैले भन्नैपर्छ, सरकार वार्ता गर ।
प्रभाकरको विप्लवसँग वार्ताका लागि भूमिका खेल्ने चाहना
केही दिन पहिले पूर्व नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)का प्रभावशाली नेता, माओवादी जनयुद्धकालका सैन्य कमाण्डर र पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’को अन्तर्वार्ता प्रकाशित भएको छ । रातोपाटीमा जेठ ४ गते प्रकाशित अन्तर्वार्तामा प्रभाकरले भनेका छन्, ‘‘तर म सरकार प्रतिबन्धतर्फ होइन वार्तातिर नै लाग्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु । विप्लवजीहरु पनि त्यस्ता गतिविधिहरु त्यागेर खुला रुपले राजनीति गर्नुपर्यो, किन भूमिगत हुनुपर्यो ? म आह्वान गर्न चाहान्छु आउनुस् काठमाडौँका मैदान र शहरहरुमा । जनतालाई आह्वान गर्नुहोस, जनता संगठित गर्नुहोस् । तपाइले राख्न खोजेको विचार के हो ? जनतालाई भन्नुस्, संविधानले अधिकार दिएकै छ । अहिले बम पड्काउनु पर्दैन । हिजो निरंकुशता थियो, त्यो अधिकार थिएन, बोल्न दिइन्नथ्यो । आज त्यो अवस्था छैन । त्यसकारण म आव्हान पनि गर्छु, तपाईं आउनुहोस् र खुला बहस गरौँ । कम्युनिस्ट पार्टीलाई अझ बृहद एकतामा लैजाऔं । सरकारलाई पनि प्रतिबन्ध फिर्ता लिएर वार्ताको माध्यमबाट यो समस्यालाई समाधान गर्न पुनः आग्रह गर्न चाहन्छु ।’’
प्रभाकरले अझै अगाडि बढेर भनेका थिए, ‘‘वार्ता र संवादबाट फेरि नयाँ एकता गरौँ । म त पार्टी एकतामा निरन्तर लागेको मान्छे हँु । माओवादी फुटेदेखि लागेर माओवादी आन्दोलनलाई पुनर्गठन गर्न नयाँस्तरसम्म एकता गरियो । बादलजी, मणिजी, मात्रिकाजीहरु आउनु पनि भयो । त्यसपछि पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्रलाई एकताबद्ध गर्न पनि भूमिका खेलें । अब मेरो काम भनेको विप्लवजीसँग पनि पार्टी एकता गर्ने हो । म त्यो भूमिका खेल्न चाहन्छु ।’’
बोलेको कुरा गरेरै देखाउने छवि बनाएका प्रभाकरको उक्त भनाई त्यसै आएजस्तो लाग्दैन । उनले वार्ता र सम्वादको सम्भावना देखेरै त्यसो भनेका हुन् । उनको स्तरबाट विप्लवलाई वार्तामा ल्याएर पार्टी एकतासम्म नपुराउलान् भन्न पनि सकिन्न ।
विप्लवको मध्यकमाण्डमा को ?
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको मध्यकमाण्ड इन्चार्ज हेमन्तप्रकाश वली ‘सुदर्शन’ गिरफतार भएपछि उक्त पार्टीले मध्यकमाण्डमा अर्को इन्चार्ज तोकेको सार्वजनिक भएको छैन । कतिपय स्रोतहरुले मध्यकमाण्ड विप्लव आफैले हेरिरहेको बताइरहेका छन् । यसरी प्रत्यक्ष आफ्नो नेतृत्वमा मध्यकमाण्ड हाँक्दा विप्लव स्वयंको उपस्थिति सोही भूगोलमा भएको अन्दाज लगाउन सकिन्छ । राजधानी वरिपरि उनको उपस्थितिले वार्ताको दिशातिर जाने संकेतका रुपमा पनि लिन सकिन्छ ।
गृहमन्त्री बादलद्वारा सदनमा विप्लवको बढाईचढाई
नेपाल बन्दको पूर्वसन्ध्यामा राजधानीलगायत मुलुकका विभिन्न स्थानमा भएका घटनाक्रम र शान्तिसुरक्षाको स्थितिबारे गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले प्रतिनिधिसभामा जानकारी दिएका छन् । त्यसक्रममा गृहमन्त्रीले आवश्यकताभन्दा बढी ‘विप्लव’को बढाईचढाई गरेको देखिन्छ । गृहमन्त्री बादलले सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा जनसरकारको रुपमा जनपरिषद भन्ने संस्थाको र जनसेनाको रुपमा चारवटा कम्पनी निर्माण गरेको बताएका छन् । त्यतिमात्र होइन गृहमन्त्री बादलले विप्लव समूहको मुख्य निशाना यतिबेला राजधानीको उपत्यका रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
गृहमन्त्री थापाले केही समययता विप्लव नेतृत्वको नेकपा संविधान, राज्यव्यवस्थाविरुद्ध र शान्ति विरोधी गतिवधि गर्दै आएको र नेकपाले सशस्त्र र गैरकानूनी गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको बताउँदै निर्वाचनको बेलादेखि शुरु भएको गतिविधिको निरन्तरता अहिलेसम्म देखिएको उल्लेख गरेका छन् । गृहमन्त्रीले हिजो र आज देशभर आगजानी र विस्फोटका घटनाहरु भएको सदनलाई जानकारी गराएका छन् । आइतबार राजधानीको विष्फोटमा चार जनाको मृत्यु र झण्डै आधा दर्जन घाइते भएको जानकारी पनि गृहमन्त्रीले दिएका छन् ।
गृहमन्त्री थापाले सदनमा दिएको अभिव्यक्ति पनि वार्तातर्फ संकेत गर्ने खालको नै छ । उनले सदनमा भनेका छन्, ‘राज्यले यसलाई नियन्त्रण गर्ने, वार्ता र सम्वादद्वारा मूलप्रवाहमा ल्याउने प्रक्रियालाई अगाडि बढाइरहेको छ । यो प्रक्रियामा सरकार अगाडि नै बढिरहेको छ ।’
एकातिर विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको मध्यकमाण्ड विप्लव आफैले सम्हालिरहेको बुझिनु र अर्कोतर्फ गृहमन्त्री बादलले चारवटा कम्पनी निर्माण गरेको र मुख्य निशाना राजधानी भएको बताउनुले यी दुई कुरामा तादात्म्य मिलेको देखिन्छ । मध्यकमाण्डमा विप्लव स्वयंको नेतृत्व हुनुले उनी त्यही भूगोलमा रहेको बुझ्न सकिन्छ भने सरकार पनि वार्ता प्रक्रियामा अगाडि बढेको अन्दाज लगाउन सकिन्छ ।
सरकारका प्रवक्ता भन्छन्, ‘हिंसा त्याग्ने संकल्प गरे वार्ता गर्न सरकार तयार’
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले प्रतिनिधिसभामा विप्लव नेतृत्वको नेकपाको हल्का बढाई चढाई गरिरहँदा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ‘हिंसा त्याग्ने संकल्प गरे नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपासँग वार्ता गर्न सरकार तयार रहेको’ बताएका छन् । सोमवारै संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै यद्यपि हिँसा जारी राखे त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने दायित्वबाट सरकार पछि नहट्ने पनि उनले स्पष्ट पारे । प्रवक्ता बाँस्कोटाले सरकारले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउनेलाई सधैं सम्मान गर्ने पनि स्पष्ट पारेका थिए । ‘शान्तिपूर्ण राजनीति गर्नेमाथि सम्मान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले सरकार सोही अनुसार अघि बढने’ उल्लेख गर्दै ‘सरकारको कुनै पनि राजनीतिक शक्तिलाई नियन्यणमा लिने चाहना, उद्देश्य र लक्ष्य नभएको’ समेत बताएका छन् । सरकारका प्रवक्ताको यो अभिव्यक्तिले पनि सरकार र विप्लवको नेकपाबीच वार्ताको वातावरण बन्दै गएको त होइन ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
प्रचण्डले किन भने, ‘अन्तिम अन्तिम हुनुपर्छ’
यता, आजै विराटनगर पुगेर विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष, पूर्वप्रधानमन्त्री र तत्कालीन माओवादीको सर्वोच्च कमाण्डर प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिले पनि केही अर्थ बोकेको आभास हुन्छ । विप्लवका पछिल्ला गतिविधिहरुप्रति आक्रामक नभएरै उनले आफ्नो अभिव्यक्तिमा विप्लवतर्फ इंगित गर्दै भनेका छन्, ‘मलाई लाग्छ यो अन्तिम–अन्तिम हुनुपर्छ । उहाँहरु अन्ततः वार्तामा आउनुको विकल्प छैन । शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउनुको विकल्प छैन ।’
अध्यक्ष प्रचण्ड यत्तिमै सीमित रहेनन् । उनले स्पष्टै भनेका छन्, ‘बन्द इत्यादि जुन उहाँहरुले गरिरहनु भएको छ, सायद प्रकारान्तरले यो वार्ताको वातावरण बनाउनकै लागि गरिरहेको हो भन्ने मलाई लागिरहेको छ ।’ वार्ताको पहल भइरहेको जस्तै गरी अध्यक्ष प्रचण्डले थपेका छन्, ‘सरकारबाट पहल भइरहेको होला नि । सीके राउतको पहल भइरहेको थाहा भएन । एकैचोटी परिणाम आएपछि थाहा भयो ।’
अध्यक्ष प्रचण्डले स्पष्टै भनेका छन्, ‘बम आतंक फैलाएर मात्रै राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त हुँदैन । अहिले राजनीतिकरुपले स्थिरता आएकै छ । एक दुईवटा बम विष्फोट हुँदैमा राजनीतिक स्थिरता छैन भनेर सोच्नु हुँदैन । बम आतंक फैलाएर मात्र राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा ठान्नु बिल्कुल सही छैन ।’ अहिलेको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, जनताको चाहना, भावना, राष्ट्रको आवश्यकता बम पड्काउने नभएको र सबै मिलेर समाजवादको नयाँ ढंगले तयारी गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने अध्यक्ष प्रचण्डको स्पष्ट मत थियो ।
यद्यपि फेरि अर्को कार्यक्रममा भने अध्यक्ष प्रचण्डले आफूले विराटनगरमा ‘मजाकको शैली’मा ‘वार्ताको वातावरण बनाउन खोजेको होला’ भनेको उल्लेख गरेका छन् । सञ्चारकर्मी संगीता खड्काको पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा भने उनले ‘राजनीतिक वातावरण बनोस् भन्ने चाहना पो अन्तर्निहित छ कि’ भनेर आफूले प्रतिकात्मकरुपमा त्यसो भनेको उल्लेख गरेका छन् ।
संयमित र संवेदनशील विप्लव नेकपा
बन्दकर्ता नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी पनि यसपटक अघिल्ला समयमा भन्दा बढी संयमित र संवेदनशील देखिएको छ । जनधनको क्षति नहोस् भन्ने प्रश्नमा यसपटक उसले ध्यान दिएको देखिएको छ । बरु ‘असावधानी’का कारण आफ्नै ४ जना कार्यकर्ता गुमाएको विप्लवको नेकपा यसपटक जनधनको क्षतिबिना नै आफ्नो कार्यक्रम सफल पार्ने दिशामा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । यद्यपि नेपाल बन्दपछि महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भने वार्ता र सम्वादको प्रसंग कतै उल्लेख गरिएको छैन ।
जेहोस्, समाचार र घटनाक्रमहरुको विश्लेषण गर्दा सरकारले वार्ता र सम्वादलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । उता, सरकारसँग प्रत्यक्ष÷परोक्ष जोडिएका व्यक्तित्व÷नेतृत्वहरुका अभिव्यक्ति भलै ती ‘मजाक’ र ‘प्रतिकात्मक’रुपमै भए पनि वार्ता र सम्वादको दिशातर्फ लक्षित देखिन्छन् । अध्यक्ष प्रचण्डले भनेजस्तै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, जनताको चाहना, भावना, राष्ट्रको आवश्यकताले द्वन्द्व र बम पड्काउने खोजेको छैन । लामो समय सशस्त्र द्वन्द्वले थिलथिलो बनेको नेपाल अब केवल विकास र समृद्धि चाहन्छ । त्यसैले भन्नैपर्छ, सरकार र विप्लव वार्ताको टेबुलमा बसेर समस्या समाधान गर ।